TILMAANTA, KA HORTAGGA IYO DAAWEYNTA CUDURRADA WAAWEYN IYO CAYAYAANKA EE IRISES - XAKAMAYNTA CAYAYAANKA
Cudurada ugu waaweyn iyo cayayaanka ee irises, sida loo tirtiro iyaga
Irises waa geedo aad u qurux badan, wadar ahaan aan qabyo ahayn, iyo walwal badan oo iyaga ka mid ah. Hase yeeshee, wax badan oo la nadiifiyo, jilicsanaanta noocyada kala duwan, ayaa ka sii daraya xaaladaha xabsiyada, waxaana suurtagal ah in ay saameyn ku yeelan karto cayayaanka iyo cudurrada.Waxaan ku qasban nahay inaan raacno shuruucda aasaasiga ah ee teknoolajiyada beeraha. Laga soo bilaabo maqaalkan waxaad ka baran doontaa sababaha ugu waaweyn ee caafimaadka saboolka ah ee dilaaga, iyo sidoo kale hababka looga hortago cudurrada, la dagaallanka dulin iyo siyaabo lagu daaweeyo midabadaas.
Ma taqaanaa? Dadka reer Slavic waxay leeyihiin magacyo noocaan ah sida "pivnik" ("luuqadda") ee "Ukrainian", "kasatik" (caleemo waxay u egyihiin sida scythe), iyo sidoo kale "perunika" (ka dib ilaahii hore ee Slavonic Perun).
Sidee loola tacaali karaa cayayaanka
Xaaladda ugu weyn ee koritaanka caafimaad iyo maqnaanshaha cayayaanka ee irisyada waa ilaalinta xeerarka agrotechnical iyo ilaalinta ubaxyada inta lagu jiro xilli sii kordhaya.
Root (basasha) caarada
Waxay dhaawici doontaa ma aha oo kaliya irises, laakiin sidoo kale dhirta kale oo faleebo kale. Cayayaankaasi wuxuu leeyahay kabo, dhererka iyo 8 dhumuc, awood u leh inuu dhigo 800 ukumo xilli kasta. Si dhakhso ah, dhalmo furfuran, caarada rootiga waxay u baahan tahay qoyaan (ugu yaraan 60%) iyo jawi diiran. Caadi ahaan waxay saameeysaa dhirta horey u soo gaadhay cayayaanka kale. Qaadashada nidaamka asaasiga ah, waxay ku degtaa dildilaaca xididada ama inta u dhaxaysa miisaanka. Sababtan awgeed, xididdada xididka ah, iyo caleenta ayaa noqda jaalle. Marka ay qaadaan walxaha beerashada, way qallalaysaa.
Sida habka of halgan, isticmaalaan Qodis ah ee sariirta ubax dayrta, hubi inaad ka saarto weli rhizomes weli biimey iyo irises buka, ilaali taariikhaha beerto. Waxaa lagula talinayaa ubaxyadaas inay doortaan meel u dhow sariirta dabacase. Kaydinta caleenta waa in lagu nadiifiyaa jeegareyaal gaar ah, nalalka laftigana waa in la qalajiyaa ~ ~ 36 ° C waxayna ku shubaan jilicsan (20 g halkii 1 kg). Ka hor intaan la beeri, sidoo kale isticmaal tuubo tuubbada si loo daaweeyo nalalka.
Inta lagu jiro xilliga sii kordhaya, daaweynta cayayaanka ka soo cayayaanka ah waxaa ka mid ah xoojin ah 0.1% Rogora, 0.2% Trichlormetaphos, 0.2-0.3% Karbofos, ama waraabinta 0.2% Keltan, Rogor "iyo" Chlorofos ". Waxaa sidoo kale loo ogol yahay in ay biyaha ku jirto biyaha cayayaanka leh.
Tani waa cayayaan qatar ah ee ma aha oo kaliya irise, laakiin sidoo kale dalagyo badan oo khudradda ah. Daaqadan 1.5mm cad waxay dhalisaa abuur iyo nalalka dhirta, waxay ku noolaan kartaa sanado badan oo abaar ah, laakiin waxay u baahan tahay dhul aad u qoyan ee qeybinta ballaaran. Naas-nuujintan waxay ku quudisaa juice iris, iyaga oo kicin kara koritaankooda, taasoo keentay in la sameeyo ubaxyo gaaban iyo barar afkoda.
Sida la dagaallanka caarada rootiga, waxaa lagama maarmaan ah in sunta laga dhigo oo lagu qalajiyo basasha. Wixii beeritaanka soo qaado meel u dhow dabacasaha. Isticmaalidda percalcite waxay burburin doontaa ukunta iyo dirxiga ee nematodes. U ogow sidoo kale waraabiyo biyaha ammonia iyo daaweynta ciidda leh HOL.
Waa muhiim! Ha ku beerin iris meel isku mid ah dhowr sano. Inta lagu jiro kaydinta, qoyaanku waa inuusan ka badnaan 70%.
Dirxiga cirku wuxuu ku noolaa dhulka muddo sanado ah. Waxay ka gedisan yihiin xididdada yaryar. Inta ugu sarreysa waxay ka caawisaa in si farsamo ah looga saaro dhibicda marka qoto-qoto dheer. Oo tan iyo markii ay ka heli karaa digada, ka hor inta bacarimiso ciidda, waxaa haboon in la kaftamaya iyo ka saareen dhammaan dirxiga. Dagaalku sidoo kale wuxuu isticmaalaa dabinka iftiinka iyo hirgelinta ammonia anhydria.
Medvedka waxay leedahay laba lammaane, garbaha hore ee cagaha iyo jejeb xoog leh. Waxay xididdada ka gooyaa xididdada. Gaar ahaan halis u ah irridaha bearded. Si aad uga ilaaliso dareenka, digtoona dhulka, isticmaal dabin. Guga, meerkuriga, jilibka, iwm. Dhismaha ayaa ciriiri doona, adiguna waxaad u baahan doontaa inaad hubiso dabinkaas oo ay burburiyaan cayayaanka. Ama ku rid tuulooyinka yaryar, halkaasoo madaxdu ay ukunti doonaan ukunta, waadna soo ururin kartaa cayayaanka.
Xilliga dayrta, qodo godad dhowr mitir ah iyo buuxi digada. Medvedka waxaa la joogaa xilliga jiilaalka. Iyo sida ugu dhakhsaha badan barafku yimaado, digada waa in laga saaro godadka. Tani waxay horseedi doontaa dhimashada cayayaan. Isticmaal suumanka biyaha ayaa suurtagal ah. Si arrintan loo sameeyo, ku buuxi dhalooyinka biyo, laakiin ma aha ilaa dhammaadka, laakin leh qiyaas 10 cm oo iyaga ku qodo dhulka. Waqti gaaban u fiirso dabinka iyo burburinta cayayaanka la qabtay.
Marar badan ayaa ku xanuunaysa carrada hoose ee qoyan. Ayadoo ay sabab u tahay hawsheeda, afkoda way jajabtaa, caleentuna waxay noqotaa mid hurdi ah oo jilicsan. Intaa waxaa dheer, qabatooyinka diilinta waxay dhaawici karaan nidaamka asaasiga ah, taas oo markaa si fudud loo saameeyo cudurka. Marka lagu guul daraysto xayiraado cagaha lagu soo galo dhulka, waa la dareemi doonaa.
Si aad u burburiso pupae, si qoto dheer u qodo oo si joogto ah u dabciyo ciidda. Bilowga xilli sii kordhaya, ku buufin leh 10% karbofos oo ku celi qalliinka ka dib todobaadkii.
Wireworm ayaa la yiraahdaa dirxiga ah ee lakabyada gujiska. Waxay leedahay midab jaalle ah waxayna noqon kartaa ciidda 3-4 sano. Cayayaanka Tani waa cirridka, waxaa jira bakteeriya, fungi, iyo waqti dambe, waxay ku dhacdaa cudurada iris, taas oo xitaa keeni karta geerida geedka.
Boogaha sida cawska iyo beerista yoylaha waa cuntadeeda ugu weyn, siday u kala horreeyaan, waa in aan si joogto ah u fiirsanaa jaridda dhirta iyo dabacsanaanta ciidda. Sidoo kale, xadhiggu wuxuu doorbidaa ciidda acidic, sidaa daraadeed waxaa lagugula talinayaa inaad sameysid lime, dambas, naylo ama burka dolomite. Oo haddii aad ka dhigto amooniyam amase ammonium sulfate, waxay kaa caawineysaa yaraynta tirada dirxiga.
Dhaawac ma aha oo kaliya irise, laakiin sidoo kale dalagyada ubax iyo khudradda. Gnaw godadka cawska on caleenta, iyo mararka qaarkood ubaxa dhirta. Waxay sidoo kale halis u yihiin sababta oo ah waxay u dulqaadanayaan bakteeriyada. Caleemo lacag ah ayaa laga tagay caleemaha.
Sameynta dabinnada qashinka iyo dharka qoyan ayaa kaa caawin doona inaad qabsato oo aad wada baabbi'iso slugs. Fiidkii ama subaxdii, cimilada qoyan iyo diiran, kala firdhinta sheyga dhoobada ah ee u dhexeeya irisyada ama isticmaalka boodhka tubaakada iyo limeka biyaha leh. Ciidda agagaarka dhirta lagu rusheeyaa superfosphate waxay ka cabsiin doontaa iyaga. Ka hortagga ayaa noqon doona ka saarida cawska.
Cayayaanka Tani, deggeli on caleemaha, caleemaha dhalinyarada iyo burooyinkeeda, waxay leedahay midab madow-cagaaran ama midab madow. Waxay ku quudisaa dheecaanka dhirta, taas oo ah sababta caleemaha loo dhuuqo, iyo caleentuna waxay noqotaa mid la yiraahdo oo cidhiidhi ah.
Qaadooyinka fosfooraska-potassium ee joogtada ah iyo jaridda dhirta waxaa loo isticmaalaa sidii tallaabooyin xakameyn ah. Haddii aphids aysan haysan waqti ay ku dhufato, markaa waxaa laga qaadaa gacanta, marka ay xanuunsanaato, waxay isticmaalaan sunta cayayaanka ee gudaha iyo kiimikada, iyaga oo 10 maalmood oo kasta ku beddelma.
Waa muhiim! Qalabka ugu fiican ee loo isticmaali karo in lagu daaweeyo irise guga ee cudurada waa xal manganese ah. Nadiifinta noocan ah waa inay socotaa 20 daqiiqo.
Thrips - aan qabin, yar, ilaa 1 mm, cayayaanka. Waxaa jira madow, cawl, brown, iyo dirxiga - cirro, cagaar iyo cawl. Waxay baabbi'iyeen dheecaanka gacanta, taas oo ay sabab u tahay caleemaha ay noqdaan kuwo la jilicsan yahay oo ay u muuqdaan kuwo isbedelaya, iyo isudheellayaasha la jabsaday ayaa lagu daboolay dhibco madow. Caadi ahaan waxay ku dhuuban yihiin burooyinka iyo walaaqyada ama sinaha caleen.
Si looga hortago oo loo xakameeyo, qodo ciidda, ka saar caws iyo biyo iridaha hawada kulul iyo qallalan. Haddii ay dhacdo dhaawacyo badan oo leh jaranjaro, geedi socodka dhirta 7-10 maalmood oo kasta oo xalalka organophosphate.
Cudurada ugu waaweyn ee iris, daaweyntooda
Irises way ka badan yihiin kuwa ka baxsan geedo kale, laakiin weli way saameynayaan labada fayras, iyo fungal, iyo bakteeriyada bakteeriyada. Marka xigta, waxaan tixgelineynaa cudurrada ugu waaweyn ee irisyada iyo siyaabaha looga hortago.
Tani waa fayras fungal, kaas oo ubaxyada madow foomamka foomamka foomamka cidhifyada taarikada caleen, ka dibna ay qalajiyaan iyo dhaco. Waa in la gooyaa warshad cudurka qabta, maxaa yeelay infekshanku waa inuu ku sii jiri karaa dhulka. Isticmaal buufin joogto ah oo Bordeaux ah ka hor iyo ka dib ubax (ama u dhigma) sida daawo.
Ascochitis, ayaa sidoo kale loo yaqaannaa caleenta caleenta, waxay horseedaa muuqaalka calaamadaha caleemaha caleemaha ee qaabka la isku dhejiyey, oo ku yaala geesaha. Haddii uu cudurku sii socdo, dhogorta caleenta saameeyeen horeyba. Inta lagu jiro daaweynta, waa in lagu dhajiyaa maskaxda in caabuqku uu ku sii jiri karo ciidda iyo hadhaaga dhirta. Si loola dagaallamo daroogooyinka isticmaalka maadada, sida Bordeaux isku dar ama beddelka, ka hor iyo ka dib ubax.
Heterosporia, ama caleenta caleenta, waa la kiciyaa laga bilaabo bartamihii July iyo waxay dareemeysaa sida ugu fiican marka cimiladu ay tahay diiran oo qoyan. Jeexjeexa wuxuu ku billaabmayaa xaashiyo xad dhaaf ah, xaashiyo gaboobay. Meelaha cagaarka ah ee caarada leh ee geesoolaha ayaa muuqda oo noqda mid weyn. Waqti ka dib, caleemaha dibadda oo dhan way engegaan, infekshankuna wuxuu ku dhacaa kuwa hoose. Aad ayey muhiim u tahay cudurkaan si joogto ah uga saarto qalajinta, caleemaha gaboobay iyo qashinka dhirta. Waxaad sidoo kale isticmaali kartaa fungicides leh copper iyo zinc.
Muuqaalka Mosaic inta badan waxaa ku dhuftey aphid. Waxay u muuqataa xargo dhexdhexaad ah iyo dhibco dhalaalaya caleenta. Tan iyo markii hab wax ku ool ah oo wax looga qabanayo masaajidka aan weli la helin, dadaal waa in la sameeyaa si loo qaado tallaabooyin ka hortag ah. Waxyaabaha ay ka mid yihiin: habka beeraha haboon, xakamaynta aphids iyo cayayaanka kale ee nuugista ee caawiya kiimikada, burburka degdega ah ee shaybaarka jirran.
Qiyaas ahaan ka hortag ah oo ka soo horjeeda dhammaan noocyada xayawaanka, ku buufinta ubax leh 1% isku-dar ah Bordeaux ayaa loo isticmaalaa.
Ma taqaanaa? Ereyga "iris" waxaa laga tarjumay luqada Giriigga sida "qaansoroob", maxaa yeelay ubaxa waxaa loo magacaabaa ilaahyadii hore ee Giriigga Iris, oo dhulka ku soo duubay qaanso roobeed.
Iyadoo sida cudur ee iris, sida miridhku, caleemaha madow muuqanayaan caleemaha, oo ku wareegsan dharka dhinta, iyo waqti leh cawska caleenta, boogaha iyo u dhinto. Maadada waa la bedelay. Gawaarida waxay ku sii jiri karaan ciidda iyo qashinka dhirta.
Waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad u hogaansanto dhaqanka (beerta iris mar labaad ku dhaji meel 3-4 sano ka dib), daadi carrada, baabi'iso caleemaha cudurka qabta oo ku dawee inta kale ee xalka leh baaruudda (ku celceli 2-dii toddobaadba illaa inta calaamadaha cudurka la waayo).
Caleenta qoyan (bakteeriyada)
Kalluunka qoyan ama jilicsan waa cudur bakteeriyo ah oo la aqoonsan karo horaantii horraanta xilliga guga, haddii aad fiiro gaar ah ku yeelato dhibco gaar ah oo caleemo ah oo ku yaal caleemaha ciriirsan. Waxay bilaabaan in ay koraan brown ka soo dhammaadka iyo ugu dambeyntii qalalaan. Saldhigga cagaha ayaa ur xun. Qaybta gudaha ee rhizomes ee saameysey waxay u egtahay tiro cad oo leh ur kareer ah.
Waa muhiim! Cudurku wuxuu ku faafaa sababtoo ah qoyaan badan iyo cufnaanta beerto, xakamaynta rhizomes iyo hordhaca digada cusub. Kansarrada kalsiyumka iyo fosfooraska, iyo sidoo kale xad-dhaafka nitrogen, ayaa sidoo kale ah kiciyaasha bakteeriyada.
Unugyada saameynaya waa in laga saaraa mindi iyo jarjar goynta leh kiniinka potassium. Wixii taran, isticmaal qalabka tayada kaliya. Ka saar caleemo cudurka qaba goobta iyo burburin, iyo dayrta, ururiyaan iyo ka saaro dhammaan haraadiga dhirta.
Waxay muuqataa labo sababood oo ah boqoshaada. Marka hore waxaa lagu dhaqaajiyey qoyaan badan waxayna ku dhaqmeysaa dhinacyada caleemaha iyo afkoda. Ugu dambeyntii, dhirta caleenta caleenta ah iyo waxaa lagu daboolay ubaxyada cawliga. Midda labaad waxay horseedaa kalluunka qallalan ee rhizomes.
Si looga hortago cudurkani inuu saameyn ku yeesho irishahaaga, ku beeri ciidda la gooyey, isticmaal maaddada caafimaadka leh, isla markiiba soo saar qeybaha waxyeellada leh oo ha iloobin inaad soo ururiso oo gubi dhammaan kuwa haraaga dayrta.
Qalalan qallalan (Fusarium)
Caleemaha qallalan waxay ku faaftaa xididada, halkaas oo, koraya, xirto weelasha geedka. Rhizomes qalalan. Inta lagu jiro xilli sii kordhaya waxay leedahay muuqaal ah oo qalajinta degdeg ah ee ubaxa iyo caleemaha. Dhirta dhintay waxay u baahan yihiin in laga saaro goobta, iyo meelaha ay koritaanka ku daween oxychloride copper. Daji irishyada caafimaad leh fungicide.
Hababka looga hortago cudurrada iyo cayayaanka
Sida aad u arki karto, ka hortagga ugu fiican ee cudurada iyo cayayaanka ayaa u hoggaansami doona xeerarka maareynta beeraha, bacriminta habboon iyo waqtigeeda marinnada, waraabinta, qodidda ciidda, ka saarista cagaarka, iyo sidoo kale xulashada qalabka beeraha ee tayo sare leh iyo hababka gaarka ah ee loo baahan yahay.
Waxaan rajeyneynaa in maqaalkan ku saabsan cayayaanka, cudurada irises iyo daaweyntooda ay adiga faa'iido leh. Ka taxadar midabadan adigoo bixiya daryeel habboon, waxaadna u baahan doontaa kaliya macluumaadka la bixiyo sida qiyaas ka hortag ah.